Home Wararka Wararkii ugu Dambeeyay Shabaab oo Madaafiic ku Weeraray Ciidamada Kenya
Wararkii ugu Dambeeyay Shabaab oo Madaafiic ku Weeraray Ciidamada Kenya
Al-Shabaab ayaa weerar madaafiic ku qaaday saldhig Ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Faxfac-dhuun ee degmada CeelWaaq, sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidanka milateriga Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegaya in tobaneeyo madaafiic lagu garaacay xerada, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan.
Al-Shabaab ayaa sheegay in guutooyinkooda qaabilsan madaafiicda ay madaafiic la eegteen xerada, isla markaana khasaare ay gaarsiiyeen Ciidamada Kenya.
Ma jirto faah faahin dhab ah laga helay khasaaraha ka dhashay duqeynta, hase ahaatee dadka deegaanka ayaa sheegaya inay maqlayeen jugta qaraxyo xooggan oo is xigay.
Deegaanka Faxfax-dhuun ayaa ka mid ah saldhigyada Ciidamada Kenya ee qeybta ka ah howl galka AMISOM ku leeyihiin Gobolka Gedo, waxaana xaruntaas ku sugan boqolaal askari oo ku hubeysan gaadiidka dabaabaadka.
Previous articleIsrasaaseyn ka dhacday Cadaado
Next articleWasiiro, Xildhibaano iyo Maamulka Gobalka Banaadir oo Kulan gaar ah ka yeeshay Amniga Muqdisho
In shaqada laga joojiyo Aamin Ambulance maxaa sababay(Aqriso)
Wasiir Maareeye oo Ganacsatada Qaarkood ku amray in aysan Dalka keeni...